Hotel Rent and Sale (ID-7) အား မရမ်းကုန်း တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Hotel Rent and Sale (ID-7)
4 Stories hotel space for rent and sale in Mayangone Township. Near to go Gandamar Whole Sale, Kabaraye Pagoda and Kabaraye Gamone Pwint. Land area - 1750 sqft. Hotel has 14 Bed-rooms. Already has hotel licensed.
Rent Price - 19000 USD (Nego)
Sale Price - 18000 Lakhs (Nego)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် Gandamar Whole Sale၊ ကမ္ဘာအေးဘုရား၊ ကမ္ဘာအေး ဂမုန်းပွင့်များသို့သွားရောက်ရန်နီးသည့်နေရာတွင် တည်ရှိသည့် ငှားရန် နှင့် ရောင်းရန်ရှိသော ဟိုတယ်ဖြစ်ပါသည်။ မြေအကျယ် - ၁၇၅၀ စတုရန်းပေရှိပါသည်။ အိပ်ခန်း ၁၄ခန်း ဖွဲ့စည်းပါရှိပါသည်။ ဟိုတယ်လိုင်စင်ပါရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ငှားရမ်းခဈေးနှုန်း - ဒေါ်လာ ၁၉၀၀၀ (ညှိနှိုင်း)
အရောင်းဈေးနှုန်း - သိန်း ၁၈၀၀၀ (ညှိနှိုင်း)
အမည်: Hotel Rent and Sale (ID-7)